समाचार - हामी प्लास्टिक सित्तैमा किन हाल्छौं
कम लागत, सुविधाजनक प्रयोग, सजिलो प्रक्रिया र निर्माण, हल्का तौल, र स्थिर भौतिक र रासायनिक गुण, प्लास्टिक एक समय इतिहासमा मानव द्वारा बनाईएको "सबैभन्दा सफल" सामग्री मध्ये एक मानिन्छ। यद्यपि, प्रयोगको विशाल रकमको साथमा, बनाइएको प्लास्टिकको फोहोर पनि एक द्रव्यमानमा छ।
यो ज्ञात छ कि प्लास्टिकको ब्यागको औसत प्रयोग समय २ minutes मिनेट हो। उदाहरण को लागी, एक टेक-आउट प्याकेजि bag् झोला, प्याक गर्न प्रयोग गरिएको देखि अस्वीकृत हुनको लागि, त्यहाँ एक मात्र छोटो दस मिनेट हुन्छ। मिसन समाप्त भएपछि, यी प्लास्टिकहरू फोहोर फोहोर वा ल्यान्डफिलमा पठाइन्छ, वा सीधा समुद्रमा फ्याँकिन्छ।
तर हामीलाई थाहा छैन, के यो प्रत्येक प्लास्टिकको झोला डिग्रेड गर्न 400 भन्दा बढी बर्ष लाग्छ, जुन २2२..8 मिलियन मिनेट हो ...
Hप्लास्टिक हानिकारक छ?
१ 1970 s० को दशकदेखि प्लास्टिक समुद्री वातावरणमा समस्याको रूपमा रिपोर्ट गरिएको छ। र हालसालैका वर्षहरूमा समस्त समाजको चिन्ताको विषय बढ्दो छ।
खाडीलाई प्रदूषण गर्ने धेरै जसो प्लास्टिक हो, जुन सयौं बर्षसम्म वातावरणमा रहन्छ। हाम्रो जलमार्गमा रद्दीटोकरीको% ०% बायोडग्रेड गर्दैन।
स्यान फ्रान्सिस्को एस्टुरी इन्स्टिच्यूटको अध्ययनले देखायो कि बे एरिया फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरूले सान फ्रान्सिस्को खाडीमा प्रति दिन अनुमानित ,000,००,००० प्लास्टिक कण मुक्त गरेका छन्, किनकि उनीहरूको स्क्रीनहरू समात्न त्यति सजिलो छैन। माइक्रोप्लास्टिक्सले प्रदूषण शोषण गर्दछ र वन्यजन्तुलाई धम्की दिन्छ जुन तिनीहरूलाई घीन पार्छ।
PCBs अर्को विषाक्त पदार्थ हो जसले खाडी तलछललाई दूषित पार्दछ। पीसीबीहरू पुराना निर्माण सामग्रीहरूमा फेला पर्दछन् र शहरी रन अफबाट हुँदै खाडीमा बग्दछन्।
खाडीमा पोषक तत्वहरूको अत्यधिक मात्रा - जस्तै नाइट्रोजन, ले हानिकारक एल्गल फुलिन सक्छ जसले माछा र अन्य वन्यजन्तुहरूलाई धम्की दिन्छ। केहि एल्गल फुलहरू पनि खतरनाक हुन्छन्, चट्टान र श्वास रोगका कारण।
प्लास्टिक प्रतिबन्धित को नीतिहरु
समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण सरकारहरू, वैज्ञानिकहरू, गैर-सरकारी संगठनहरू, र विश्वभरि जनताका सदस्यहरूका लागि महत्वपूर्ण वातावरणीय चिन्ताको विषय भएको छ। माइक्रोबीड्स कम गर्ने नीति २०१ 2014 मा शुरू भएपछि, प्लास्टिक झोलाका लागि हस्तक्षेप १ 199 199 १ भन्दा धेरै सुरु भयो।
- नोभेम्बर १, २०१ 2018, "कुनै स्ट्र्याW नोभेम्बर" को लागि एक्वेरियमहरू ब्यान्ड
- १ 1979 1979 in मा संयुक्त राज्यमा र २००१ मा अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चामा प्लास्टिक प्रतिबन्धित।
- क्यानाडाले २०२१ सम्ममा एकल-प्रयोग प्लास्टिकलाई प्रतिबन्ध गर्ने लक्ष्य राख्यो
- पेरूले एकल प्रयोगको प्लास्टिक प्रतिबन्धित जनवरी १ 2019, २०१।
- SAN DIEGO स्टायरोफोम खाना र पेय कन्टेनर जनवरी २०१ 2019 लाई प्रतिबन्धित गर्दछ
- वाशि Washington्टन, डीसी, प्लास्टिक स्ट्र स्ट्र प्रतिबन्ध २०१ 2019 जुलाई २०१ begins देखि सुरु हुनेछ
- "प्लास्टिक बन्देज" अब आधिकारिक रूपमा जनवरी १, २०२१ मा चीनमा लागू गरीएको छ
कागजहरू यो अवस्थामा खेल परिवर्तनकर्ता हुन सक्छ।
मेरो प्याकेजिंग रणनीति के हुनु पर्छ यदि प्लास्टिक मुक्त गर्न चाहानुहुन्छ? यो धेरै कम्पनीहरूको दिमागमा प्रश्न हुन सक्छ। प्लास्टिक प्रदूषण र उदाउँदो क्षेत्रहरू जस्तै ई-वाणिज्य, एक्सप्रेस डेलिभरी, र खाद्य वितरण, ई-वाणिज्य, एक्सप्रेस वितरण र टेकवे उद्योगहरूको प्रमुख क्षेत्रहरूमा छिटो विकास हुँदैछ। जब खाना र टेकवेको लागि किनमेलमा कुनै प्लास्टिकको झोला हुँदैन, कुनै पिउने बोटमा कुनै प्लास्टिकको पराल हुँदैन, जुन निस्सन्देह अधिकांश व्यक्तिको दैनिक जीवनमा असर गर्दछ। के प्लास्टिक उत्पादनहरु को विकल्प को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ?
पर्यावरण-मैत्री घरेलु वस्तुहरू र स्वच्छता उत्पादनहरू तपाईंलाई ग्रहमा पठाइनु हुँदैन जुन हाम्रो ग्रहको लागि हानिकारक हो। यस्तो अवस्थामा, एक बायोडिग्रेडेबल सामग्रीलाई प्राथमिकतामा लिनु पर्छ, त्यो कागज हो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो पेपर मिलहरू मध्ये एकले २०२० को लागि उनीहरूको लक्ष्यहरू म्यापमा राखेको छ र स्थिरता रोडमेप २०२० मा परिभाषित गरिएको यो लक्ष्य प्राप्त गर्न दिगो अभ्यासहरू सक्रियतापूर्वक अपनाउँछ। हाम्रो क्राफ्ट पेपर र लाइनर बोर्ड १००% डिग्रेडेबल छ, साथै हाम्रो बायो लेमिनेशन बायोडिग्रेडेबल पनि छ। प्लास्टिक मुक्त प्रवृत्ति बीच एक अधिक दिगो विकल्प।